Shiinaha Customized boorsadaada boorsada kalluumaysiga, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada isboortiga > Boorsada kalluumeysiga
1. Hordhaca alaabada ee boorsada kaluumeysiga:
(1) Nidaamyada tolitaanka wanaagsan, boorsadeena boorsada ee kalluumeysiga waxaa laga sameeyay tayo sare leh oo biyo ah 1200D oo cufan oo naylon ah oo leh silsilado waara iyo Sibbaarada SBS. Habka tolitaanka saxda ah ee 110 wuxuu ku siin karaa 20% caabbinta biyaha iyo adkaanta.
(2) Dhamaan boorsada wax lagu jiito ee kalluumeysiga waxaa loo qaybiyaa 11 qol oo kala duwan oo ay ku jiraan jiinyeerro tayo sare leh oo SBS ah. Naqshadeynta qaybaha gaarka ah waxay ka dhigeysaa qolka wadar ahaan 18 aagag yar oo iska yar. Muuqaalkan wanaagsan wuxuu ku siinayaa meel kugu filan oo aad ku caddeyso dhammaan qalabka iyo waxyaabaha daruuriga u ah.
(3) ikhtiraac la awoodi karo-In kasta oo boorsada kalluumeysiga ay leedahay astaamo dheeri ah, oo ay ka mid yihiin 1200D biyo nayloon oo cufan leh, daboolka roobka, muraayadaha muraayadaha adag ee qaabaysan, guntimaha tayada sare leh iyo jiinyeyaasha SBS, muuqaalka ugu weyni waa qiime jaban. Xaglo kasta, waa boorsada ugu fiican oo dhan. Hal sano oo wadarta dammaanadda nabadda maskaxda ah!
(4) Adkaysiga iyo xirashada iska caabbintu waa astaamaha ugu waaweyn ee alaabtayada.
2. Xaddidaadaha alaabada (qeexitaannada) boorsada kalluumeysiga
3. Sidee loo doortaa boorsada ugu fiican kalluumeysiga?
1. Raadi qalab raagaya
Waxyaabaha loo isticmaalay boorsada ugu fiican ee kalluumaysiga waa inay iswaafajiyaan: Qalalaasaha waara, ee adag waa lama huraan-boorso aadan rabin inaad jabto markay biyaha ka soo baxaan. Raadi xirmooyinka, dharka la xoojiyay sida fiilooyinka adag ee polyester-ka iyo cirbadaha laba-ciribtirka ah si loo hubiyo xirmooyinka u adkaysta dharka. Intaas waxaa sii dheer, maadaama laga yaabo inaad sidato waxyaabo fiiqan, waa inaad hubisaa in bacda si adag loo safay. Muuqaal kale oo wanaagsan oo mudan in fiiro gaar ah loo yeesho ayaa ah jiinyeer caaryeysan ama wasakh u adkaysta.
2. Raaxo waa furaha
Raaxo waxaa la dhihi karaa waa muuqaalka ugu muhiimsan ee boorsooyinka kalluumeysiga. Hubso in boorsadaada aad soo iibsatay ay dhabarka iyo garbaha ku duuban tahay. Haddii aadan ku jirin biyaha muddo dheer, fadlan hubi in boorsadaadu tahay ergonomic. Tusaale ahaan, iska ilaali boorsooyinka dhabarka ee cidhiidhiga garabka maxaa yeelay si fudud ayaa loo goyn karaa. Xitaa iyada oo loo qaybiyo culeyska iyo taageerada saxda ah ee dhabarka, waxaad hubin kartaa inaad wax badan ka hesho jirkaaga adoo ilaalinaya dhabarkaaga. Intaa waxaa dheer, muuqaal kale oo waxtar leh ayaa ah taageerada shabakadda. Dharkaan ayaa u oggolaanaya jirkaaga inuu "neefsado" oo qabow ka dhigo.
3. Hubso in boorsadaadu biyuhu ka madhan yihiin
Waxay u muuqan kartaa wax iska cad, laakiin si la yaab leh badanaa waa la iska indhatiraa - boorsadaada kalluumeysiga waa inay ahaato mid aan biyuhu xirin. Waxaa jira fursado badan oo kala duwan oo laga helo polyester ilaa nylon, laakiin wax kastoo aad doorato, hubi inay xoog badan tahay. Boorsada biyuhu ka soo galaan ma aha oo kaliya mid fudud oo nadiif ah, laakiin waxay kaloo ka ilaalinaysaa qalabkaaga iyo qalabkaaga waxyeello.
4. Xulo cabirka saxda ah
Waa muhiim in la hubiyo in boorsadaadu ay ballaaran tahay oo ku habboon baahiyahaaga. Kahor intaadan iibsan boorso maqaar, fadlan tixgeli waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato. Waxay ku xirnaan doontaa kalluunka aad rabto inaad soo qabato iyo qalabka loo baahan yahay. Sidaa darteed, markaad dooranayso boorso, hubi inaad doorato meel ku filan. Intaas waxaa sii dheer, boorsada ugu qaabeysan waxay lahaan doontaa qolal ku filan iyo jeebado ku habboon si sahlan loogu heli karo inta lagu guda jiro daweynta. Si kastaba ha noqotee, xusuusnow in cabirka sii kordhaya uu kordhin doono culeyska-markaa iska hubi inuu saaxiibtinnimo kuu yeesho.
5. Boorsada kalluumeysiga packaging and delivery
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 45cm X 32cm X 20cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan qaabeyn doonnaa baakidhka boorsadaan kalluumeysiga sida waafaqsan shuruudahaaga.
(9) Haddii aad u baahato sambal ka mid ah boorsadan kalluumeysiga, waxaan dooran doonnaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
(3) Waxaan nahay soo saare boorsooyinka kalluumeysiga Disney, boorsooyinka Wal-Mart, iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Boorsada kalluumeysiga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, la habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka